Izvo zvigadzirwa zvine chekuita nekufema, biodegradable, inorwisa mabhakitiriya uye inozvipa-yega simba nanofiber yemagetsi ganda inoenderana neiyo nanogenerator yekukwesana - Zhejiang Leinuo Textile Technology Co., Ltd.
Dhirowa tambo yekunyora
Rubha Yakafukidzwa shinda
Kopa Nylon Yarn
Izvo zvigadzirwa zvine chekuita nekufema, biodegradable, inorwisa mabhakitiriya uye inozvipa-yega simba nanofiber yemagetsi ganda inoenderana neiyo nanogenerator yekukwesana
Senhengo huru yemuviri wemunhu, ganda remunhu harina chete iro rinokosha mabasa ekudzivirira, secretion uye kufema, asi zvakare yakakosha somatosensory system yekudyidzana uye kutaurirana pakati pevanhu nepanyika nyika. Mumakore achangopfuura, kuvandudzwa kwebionic electronic ganda kwakamutsa kufarira kukuru kwevaongorori, uye ine akasiyana mafomu ekushandisa mune inopfeka yemunhu yekutarisa hutano, akangwara prosthesis uye marobhoti, kudyidzana kwevanhu-komputa uye njere dzekugadzira.
Kubva pane akasiyana masystem ekuona enzira, Magetsi ganda rinogona kusarudzwa kuita piezoresistive, capacitive, piezoelectric uye triboelectric mhando. Ganda remagetsi rinoona uye rinowanza zvakasiyana siyana zvekusimudzira zvakatipoteredza, kusanganisira kupisa, unyoro, kumanikidza, kudengenyeka nekubata, uye inoshandura iwo kuva chaiwo-nguva uye anooneka emagetsi pulses. Simba rekukakavara rudzi rwekushandisa kusangana kwemagetsi pamwe nekubatanidza mhedzisiro ye electrostatic induction, yakakosha yakajairika magetsi simba inogona kushandurwa kuita emagetsi simba kuwana kune nyowani magetsi tekinoroji, yakaderera mutengo, nyore mamiriro, kushandiswa kuri nyore, sarudzo yezvinhu, yakakwirira kutendeuka kushanda, nezvimwewo. Mumunda wesimba rinosakara sosi uye inofambisa magetsi ine tarisiro yekushandisa, ndiyo sarudzo yakanaka yesimba rekuzvimiririra rerudzi rwemagetsi ganda.
Kuchinja-chinja, kuwedzererwa, utetsa, kuchinjika uye kusimba kwemakaniki ndiwo maitiro akajairika ekutsvagisa ganda remagetsi parizvino, izvo zvakare zviri nyore kuona. Mumakore achangopfuura, kuitira kuti uvandudze kushanda kwakazara kwemagetsi ganda, iwo akasarudzika mashandiro eganda remagetsi, zvakadai sekugadziriswa, kuzviporesa, chimiro ndangariro, electroluminescence uye zvemaziso luminescence, ave akafundwa zvishoma nezvishoma. Kunyangwe iri kuenderera kugadzirisa uye kugadzirisa kwezvinhu zvataurwa pamusoro, kunyaradzwa, kuchengetedzwa uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza kweganda remagetsi zvakaregeredzwa, izvo kusvika pamwero mukuru zvichitadzisa kushandiswa kunoshanda kwemagetsi ganda. saka, iro remagetsi ganda rine kunyaradzwa kwakanaka uye kuita kunofanirwa kuve kunofema, biodegradable uye inorwisa mabhakitiriya. Kubvumidzwa kwemweya kuita kwakakosha kuita kugadzirisa kupisa uye humidity balance uye nekuona kuchinjaniswa kwegasi pakati pemuviri wemunhu nenzvimbo yekunze. zvisinei, yakanyanya yakakwira-inoshanda yemagetsi ganda KUSHANDISA membranes se electrode kana substrates, izvo zvinogona kukonzera kutsamwa kweganda uye kunyangwe kuzvimba uye kuvava. In addition, iko kubata kwenguva refu pakati pee-ganda uye ganda revanhu inzvimbo yakanaka yekukura kwehutachiona, saka mishonga inorwisa mabhakitiriya yakakosha kuti e-ganda idzivise hutachiona kukura uye kudzivirira Pamusoro pehutachiona. In addition, zvinhu zvizhinji hazvirasiki, pakupera kwehupenyu hwavo hunobatsira, inogona kuve e-marara, kana kukuvadza muviri wemunhu kana kusvibisa nharaunda.
Recently, timu yekutsvagisa yeBeijing Institute yeNanometer Energy uye MaSystem, Chinese Academy yeSainzi yakagadzira inofema, biodegradable, inorwisa mabhakitiriya uye inozvipa-yega-nanofiber yemagetsi ganda zvichibva pakukanganisa nanogenerator, iyo yakaona yekumanikidza simba kuunganidzwa uye kuzvityaira-inotyairwa kuona kweyemunhu muviri physiology uye akabatana inofamba masheni. Ne poly lactic acid / glycolic acid copolymer (PLGA) uye polyvinyl doro (PVA) nanofibers membrane zvakateerana seyakagadziriswa magetsi uye iyo substrate uye sirivheri nanowires (AgNW) semurevereri, inoumbwa nematanho-akaturikidzana akadzedzereka nanofibers network uye hombe nhamba yeatatu-mativi dhizaini yemakomba-nano maburi anoenderana nemagetsi ganda kukwesana simba, ive inobatsira kune ganda remuviri wemunhu uye nharaunda yekunze yekupisa kupisa. Panguva imwe, iro remagetsi ganda rine yakanaka kwazvo inorwisa mabhakitiriya zvinhu, inogona kudzivisa zvakanyanya kukura kweEscherichia coli uye Staphylococcus aureus, uye kudzivirira hutachiona hutachiona. Nekushandura saizi uye kuenzanisa kweiyo inogona kuora PLGA nePVA, kudzikisira kutenderera kweganda remagetsi kunogona kugadziriswa kwemazuva mazhinji kusvika kumavhiki akati wandei. Pamusoro pe, iine huwandu hwekuburitsa basa re 130 mW / m2 uye nemagetsi ekupindura kunzwisisika kwe 0.011 kPA-1, iro remagetsi ganda rinogona kuona chaiyo-nguva isiri-inokonzeresa-yega-inotarisisa yekutarisa kweanoratidzira masystem (senge microexpressions, kufamba kweropa, kufema uye kudaidzwa) nekubatana kwemajoini (dzakadai semabhureki, magokora, mabvi nezvikwama) yemuviri wemunhu. Iri basa rinopa risingaenzaniswi zano rekutbiodegradableinogonesa multifunctional yemagetsi ganda. Mhedzisiro ye "Inofema, biodegradable, antibacterial, uye pachezvako - chakagadzirwa nemagetsi ganda -based pane ese - nanofiber triboelectric nanogenerators" zita, rakabudiswa muSainzi Kufambira Mberi.
Dhizaini dhizaini uye kuumbwa hunhu hwakazara nanofiber yemagetsi ganda inoenderana nekukwesana nanogenerator
Hunhu hwesimba, kukwana kwemhepo, uye magetsi anoburitsa zvivakwa
Hunhu hweantimicrobial uye biodegradable zvivakwa
Zvirongwa zvemuviri zvemuviri uye kubatana kwekutarisa kufamba
Sayenzi Kufambira Mberi (KANA:12.804) Zuva rePub :2020-06-26,
(Kunobva: Kukakavara nanogenerator TENG)
Electrospun zvinhu zvenaironi 66 Unogona kuona kuburitswa kwakadzorwa kwepicaridin
Copyright © 2019 Zhejiang Leinuo Textile Technology Co., All Kodzero Dzakachengetedzwa.